Nbudata Recuva 1.53.1087 – Vessoft
WindowsSystemNkwado & IweghachiteRecuva
Udi: Nkwado & Iweghachite
Ibe akwukwọ: Recuva
Recuva – software naghachi mmadụ na mberede ehichapụ, furu efu ma ọ bụ merụọ faịlụ. The software na-enyocha kwa na ngosipụta ndị dị faịlụ okûnam na ike draịva, mobile ngwaọrụ, ebe nchekwa kaadị, USB-draịva ndị ọzọ data ebu. Recuva nwere ọrụ adaba na nke ọma search aha, nchekwa, disks na faịlụ. The software na-egosiputa ọnọdụ nke weghachiri eweghachi faịlụ na ẹkụre mgbake usoro. Recuva nwere onye kensinammuo na mfe iji interface.
Mgbake nke ehichapụ na-emerụ faịlụ
Mgbake nke ozi na dị iche iche data na-ebu
Kennwere enwe, ikpe
CCleaner – sọftụwia a ma ama ka ịsacha ma kwalite sistemụ. Akụrụngwa ahụ na-enye gị ohere wepu data ndekọ ma hichaa akụkọ ihe mere eme nke ịntanetị.
Defraggler – ihe eji emebi draịvụ draịvụ na faịlụ dị iche iche. Ihe ngwanrọ a na-enyocha ma gosipụta ozi zuru ezu banyere diski ahụ.
Ngwá ọrụ iji nweta ihe ọmụma zuru ezu banyere sistemụ. The software egosiputa àgwà nke arụnyere ngwaike.
Comments na Recuva
Ọkachamara EaseUS Data Recovery – ngwanrọ iji weghachite data nke ụdị dị iche iche. Akụrụngwa ahụ nwere ike iweghachi faịlụ furu efu ma ọ bụ enweghị ya site na ngwaọrụ dị iche iche na ndị na-ebu data.
Nke a bụ ụdị nke ngwa na ọrụ iji nwalee, chọpụta ma dozie nsogbu kọmputa dị iche iche.
Iweghachite Ike Data MiniTool – ngwanrọ iji dị mfe iji nwetaghachi data nke ụdị dị iche iche na kọmputa gị yana ọtụtụ ndị na – ebu data. Akụrụngwa na-akwado draịva siri ike yana sistemụ faịlụ nke ụdị dị iche iche.
The ngwá ọrụ iji defrag na draịva na a dịgasị iche iche nke bara uru atụmatụ. The software-enye gị ohere na-arụ ọrụ na ụdịdị nke defragmentation na njikarịcha.
Nke a bụ onye njikwa faili nke na-akwado ọrụ niile, ọrụ FTP-ahịa na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ iji rụọ ọrụ na faịlụ na ndekọ.
Ntinye ihe eji eme ihe AV – ihe otutu nke ndi oru puru iche nke ngwa agha iji kpochapu ngwa antivirus na antispyware ha.
The software ele video mgbasaozi site na internet. Ọzọkwa software na-enyere aka ike gị ọwa nyefee video na netwọk.
Graphic nchịkọta akụkọ na a set nke adaba ngwaọrụ-arụ ọrụ na ihe oyiyi. The software-enye gị ohere iji ogbe nhazi mgbe eji nzacha.
HTC Mmekọrịta – sọftụwia ịmekọrịta data dị n’etiti ngwaọrụ HTC na kọmputa. Ọ na-akwado mmelite akpaka nke ndị na-anya ngwaọrụ ahụ.